Search လိုးရှင်းလိမ်းတဲ့ video ဖာ`+x`!8`. - BajarFB.com
Search Results - လိုးရှင်းလိမ်းတဲ့ video ဖာ`+x`!8`.
Yoga Mat(ယောဂ ဖျာ)
Yoga Mat(ယောဂ ဖျာ) Reference code - ယခုဈေး -8,000 ks✅✅✅ ယခင်ဈေး- 15,000 ks✅✅✅ အိစက်ညက်ညောပြီးသက်သောင့်သက်သာ ရှိစေမဲ့ ဖျာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အိမ်တွင်းယောဂကျင့်သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်။အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပုံမှန်လုပ်တတ်တဲ့သူအတွက် လည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်။ဒီဖျာလေးအသုံးပြု တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျောတွေ ဒူးတွေ တံတောင်တွေ ခါးတွေမနာစေတာ့ပါဘူးနော်။ကြွေပား ပါကေး သံမံတလင်းတို့ ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ အနာတရဖြစ်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်။ ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက Twiceaworld Page Mesenger (သို့) Viber 09767302814 သို့ မှာယူလိုသောပစ္စည်း / နာမည် / ဖုန်းနံပါတ် / လိပ်စာအပြည့်အစုံပြောပီးမှာယူနိုင်ပါတယ်။ သိချင်တာရှိပါက 09767302813 သို့ ဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Unicode Yoga Mat(ယောဂ ဖြာ) Reference code - ယခုဈေး -8,000 ks✅✅✅ ယခငျဈေး- 15,000 ks✅✅✅ အိစကျညကျညောပွီးသကျသောငျ့သကျသာ ရှိစမေဲ့ ဖြာလေးနဲ့မိတျဆကျပေးပါရစေ။ အိမျတှငျးယောဂကငျြ့သူတှအေတှကျလညျးအဆငျပွမေယျ။အိမျတှငျးလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ပုံမှနျလုပျတတျတဲ့သူအတှကျ လညျးအဆငျပွစေပေါတယျ။ဒီဖြာလေးအသုံးပွု တဲ့အတှကျကွောငျ့ ကြောတှေ ဒူးတှေ တံတောငျတှေ ခါးတှမေနာစတော့ပါဘူးနျော။ကွှပေား ပါကေး သံမံတလငျးတို့ ပျေါမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလို့ အနာတရဖွဈမှာ စိုးရိမျစရာမလိုတော့ဘူးနျော။ ဆကျသှယျမှာယူလိုပါက Twiceaworld Page Mesenger (သို့) Viber 09767302814 သို့ မှာယူလိုသောပစ်စညျး / နာမညျ / ဖုနျးနံပါတျ / လိပျစာအပွညျ့အစုံပွောပီးမှာယူနိုငျပါတယျ။ သိခငျြတာရှိပါက 09767302813 သို့ ဖုနျးဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ။ #Yogamat Twiceaworld 28 Jan · 500 views
"สาวพิม" โต้กลับ 8 ปม ลั่นถึงฟ้องคดี "ไบรท์ ชินวัตร" ลวนลาม!
มีหน้าเถียงให้รู้ไป!? "สาวพิม" โต้กลับ 8 ปม ลั่นถึงฟ้องคดี "ไบรท์ ชินวัตร" ลวนลาม! #ข่าวด่วนTOPNEWS #TOPNEWS ติดตามคลิปข่าวด่วนได้ที่ : https://bit.ly/TopnewsKhaoDuan ดาวน์โหลดแอป TOP NEWS : http://onelink.to/c68pbd ติดต่อ โฆษณา [email protected] ติดตามข่าวสารจากทางเราได้ จากทุกๆ ช่องทาง กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ, IPM , CSAT, TIK , 3BB, TOT ช่องหมายเลข 77 , AIS ช่องหมายเลข 658 Youtube : https://bit.ly/YoutbTopTV FB : https://bit.ly/FBTOPTV IG : https://bit.ly/IGTOPTV Twitter : https://bit.ly/TWTOPTV Line : bit.ly/LINExTOPTV Website : https://www.topnews.co.th TOP News 23 Oct · 46K views
Video Title: ชั่วคราว (One Night Stand) Artist: TABASCO X ATOM Originally Released: 27-09-2016 GMM Grammy 10 Aug 2019 · 7.8M views
"World of Himaparn" Trailer ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီ၂၆ရက်​​နေ့ထဲက ထိုင်းမှာပြခဲ့တဲ့ကားပါ ​သောကြာ စ​နေ တနင်္ဂ​နွေ ၃ရက်​ပြပါတယ်​ ဇာတ်​ကားရဲ့90%​လောက်​က CG​တွေနဲ့လုပ်​ထားတာပါ အရမ်းကြည့်​​ကောင်းတဲ့ဇာတ်​လမ်းတွဲတစ်​ခုလဲဖြစ်​ပါတယ်​ အက်​မင်​က trailer​လေးပဲဘာသာပြန်​​ပေးတာ​နော်​​ ဇာတ်​ကားကိုဘာသာမပြန်​ခိုင်းပါနဲ့လို့😁 ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း 🌁🌁🌁🌁 ပင်​မဒါရဲ့​မွေးစားအ​ဖေဟာ ဦး​နှောက်​ကင်​ဆာ​ရောဂါကို ဆိုးရွားစွာခံစား​နေရတယ်​ Himaparn ​တောအုပ်​မှာရှိတဲ့ Ulok Manee ဆိုတဲ့ ​မှော်​​ကျောက်​တုံးက ဆု​တောင်း​တွေကိုတကယ်​ဖြည့်​​ပေးနိုင်​တယ်​ဆိုတာ ပင်​မဒါသိလိုက်​ရတယ်​ ဒါ့​ကြောင့်​ သူသွားရှာဖို့ဆုံးဖြတ်​လိုက်​တယ်​ အဲ့ဒီ​နေရာကို​ရောက်​ဖူးပြီးအသက်​ရှင်​လျက်​ပြန်​လာနိုင်​တဲ့ "နင်​"ရဲ့သား ကရစ်​ကို Himaparnဆီကို လမ်းပြ​ပေးဖို့ေ​တာင်းဆိုခဲ့တယ်​ အစက​တော့ ကရစ်​ငြင်းခဲ့တယ်​ ဒါကစိတ်​ကူးယဉ်​ဆန်​တဲ့အရာလို့​ပြောလိုက်​တယ်​ တကယ်​က သူ့အစ်​ကို အဲ့​နေရာကိုသွားပြီး​နောက်​ ​ပျောက်​သွားတာ​ကြောင့်​ပါ ပင်​မဒါက အဲ့​နေရာကိုသွားဖို့ ပတ်​စန်​ရဲ့အကူအညီနဲ့ သူမရဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်​လိုက်​တယ်​ ပတ်​စန်​က သူမအ​ဖေရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်​​ဆွေရဲ့သား သူမကိုတိတ်​တခိုးချစ်​​နေမိတဲ့သူတစ်​​ယောက်​​ပေါ့ ဒီမစ်​ရှင်​​အောင်​မြင်​ပြီးတာနဲ့ ပင်မဒာ​ကိုလက်​ထပ်​ဖို့ဆန္ဒရှိ​နေတယ်​ ကရစ်​က သူ့အ​ဖေပိုင်​ဆိုင်​တဲ့​မြေပုံကို​တွေ့လိုက်​ရတဲ့အခါ စိတ်​​ပြောင်းပြီး အဲ့​နေရာကိုသွားမယ့်​ ပင်​မဒါရဲ့အဖွဲ့မှာပါလိုက်​တယ်​ သူ့အစ်​ကိုကိုထပ်​​တွေ့နိုင်​ဖို့​မျှော်​လင့်​ရင်းနဲ့​ပေါ့......
"World of Himaparn" Trailer ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီ၂၆ရက်​​နေ့ထဲက ထိုင်းမှာပြခဲ့တဲ့ကားပါ ​သောကြာ စ​နေ တနင်္ဂ​နွေ ၃ရက်​ပြပါတယ်​ ဇာတ်​ကားရဲ့90%​လောက်​က CG​တွေနဲ့လုပ်​ထားတာပါ အရမ်းကြည့်​​ကောင်းတဲ့ဇာတ်​လမ်းတွဲတစ်​ခုလဲဖြစ်​ပါတယ်​ အက်​မင်​က trailer​လေးပဲဘာသာပြန်​​ပေးတာ​နော်​​ ဇာတ်​ကားကိုဘာသာမပြန်​ခိုင်းပါနဲ့လို့😁 ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း 🌁🌁🌁🌁 ပင်​မဒါရဲ့​မွေးစားအ​ဖေဟာ ဦး​နှောက်​ကင်​ဆာ​ရောဂါကို ဆိုးရွားစွာခံစား​နေရတယ်​ Himaparn ​တောအုပ်​မှာရှိတဲ့ Ulok Manee ဆိုတဲ့ ​မှော်​​ကျောက်​တုံးက ဆု​တောင်း​တွေကိုတကယ်​ဖြည့်​​ပေးနိုင်​တယ်​ဆိုတာ ပင်​မဒါသိလိုက်​ရတယ်​ ဒါ့​ကြောင့်​ သူသွားရှာဖို့ဆုံးဖြတ်​လိုက်​တယ်​ အဲ့ဒီ​နေရာကို​ရောက်​ဖူးပြီးအသက်​ရှင်​လျက်​ပြန်​လာနိုင်​တဲ့ "နင်​"ရဲ့သား ကရစ်​ကို Himaparnဆီကို လမ်းပြ​ပေးဖို့ေ​တာင်းဆိုခဲ့တယ်​ အစက​တော့ ကရစ်​ငြင်းခဲ့တယ်​ ဒါကစိတ်​ကူးယဉ်​ဆန်​တဲ့အရာလို့​ပြောလိုက်​တယ်​ တကယ်​က သူ့အစ်​ကို အဲ့​နေရာကိုသွားပြီး​နောက်​ ​ပျောက်​သွားတာ​ကြောင့်​ပါ ပင်​မဒါက အဲ့​နေရာကိုသွားဖို့ ပတ်​စန်​ရဲ့အကူအညီနဲ့ သူမရဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်​လိုက်​တယ်​ ပတ်​စန်​က သူမအ​ဖေရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်​​ဆွေရဲ့သား သူမကိုတိတ်​တခိုးချစ်​​နေမိတဲ့သူတစ်​​ယောက်​​ပေါ့ ဒီမစ်​ရှင်​​အောင်​မြင်​ပြီးတာနဲ့ ပင်မဒာ​ကိုလက်​ထပ်​ဖို့ဆန္ဒရှိ​နေတယ်​ ကရစ်​က သူ့အ​ဖေပိုင်​ဆိုင်​တဲ့​မြေပုံကို​တွေ့လိုက်​ရတဲ့အခါ စိတ်​​ပြောင်းပြီး အဲ့​နေရာကိုသွားမယ့်​ ပင်​မဒါရဲ့အဖွဲ့မှာပါလိုက်​တယ်​ သူ့အစ်​ကိုကိုထပ်​​တွေ့နိုင်​ဖို့​မျှော်​လင့်​ရင်းနဲ့​ပေါ့...... Thai Drama&Series MM Sub 1 Aug · 10K views
Presenting the first video song "Aa Paas Aa" in kannada from the Bollywood Psycho thriller movie #XRayTheInnerImage. Aa Paas Aa Kannada isasensuous song which is sung by Lk Laxmikant. The music of the song is composed by Raaj Aashoo. Aa Paas Aa (Kannada) features Rahul Sharma and Yaashi Kapoor. X Ray (The Inner Image) is starring debutant Rahul Sharma and Yaashi Kapoor. X Ray (The Inner Image) is Directed by Rajiv S Ruia and is produced by Pradeep K Sharma. X Ray (The Inner Image) is made in5languages simultaneously Hindi - Tamil - Telugu - Kannada - English. Song Aa Paas Aa (Kannada) Movie- X Ray (The Inner Image) Music - Raaj Aashoo Singer- Lk Laxmikant Programmed and Arranged- Shantanu Dutta Mixed and mastered- Lk Laxmikant Visual promotion- Aasif & Akash Music Label- T Series Choreographer- Rajiv Ruia Editor- Komal Varma DOP- Javed Ahatha T-Series Kannada - Sandalwood 27 Nov 2019 · 8M views